Maitiro ekuwana vanyoreri paYouTube | ECommerce nhau
Maitiro ekuita vanyori paYouTube
Chimwe chezviitwa zvatinoita tese paInternet kuvhura chiteshi cheYouTube. Tingave tiri vanhu, makambani, zvitoro zvepamhepo ... isu tese tinoda kuve nekuvapo mune iyo network iyo, zvakanyanya uye zvakanyanya, iri kuita boom yakakura. Asi danho rinotevera nzira yekuwana vanyoreri paYouTube. Chii chakanyanya kuoma?
Kuve neYouTube chiteshi hazvibatsiri kana vanhu vasingaone mavhidhiyo aunotumira, uye kuwana iwo, kupfuura mhuri yako neshamwari, zvinogona kunetsa. Asi hazvigoneki. Isu tinotaura nezve dzimwe nzira dzekuvatora.
1 YouTube chiteshi, sei kubheja pairi?
2 Nzira dzekuwana vanyoreri paYouTube
2.1 Mhanyai makwikwi kana sweepstakes
2.2 Ita chimwe chinhu chakasiyana
2.3 Ipa dhizaini inoyevedza kuchiteshi chako
2.4 Kopa mavara kumakwikwi ako
2.5 Bhabhatidza vanyoreri vako
2.6 Itai mishandirapamwe inobhadharwa
2.7 Batira pamwe nema youtubers
2.8 Usakanganwa nezve SEO YouTube
YouTube chiteshi, sei kubheja pairi?
Kana iwe ukaona, masocial network ari kuchinja. Pakutanga, chaibudirira chaiva chinyorwa. Zvadaro mifananidzo, zvimiti mune zvose zvinyorwa uye mufananidzo uye, ikozvino, mavhidhiyo.
Manetiweki akadai seTikTok, Instagram ... ari kuwedzera kujoinha masimba ezvekuona, uye kwete zvemukati zvemifananidzo, asi zvemukati zvevhidhiyo.
Uyewo, vazhinji vanofurira vane mukurumbira nemavhidhiyo avo, akadai saRubius, Ibai Llanos, nezvimwe. izvo zvaita kuti munhu wese asvetuke kugadzira chiteshi.
Munyaya yeCommerce zvakare inogoneka, nekuti inobatsira kubatana neveruzhinji. Asi hazvina kukodzera kurodha chero vhidhiyo, zvakakosha kuti uite kuronga kwekunyora kuti ukwanise kuwana vateereri vauri kutsvaga uye, pamusoro pezvose, vanyoreri paYouTube.
Nzira dzekuwana vanyoreri paYouTube
Kana iwe uchangotanga, kana yave nguva asi iwe uchiona kuti vanyoreri havasi kukwira, uye kuti iwe ungade kusvika kune vanhu vazhinji, heano mamwe mazano anogona kukubatsira kuti uzviite.
Mhanyai makwikwi kana sweepstakes
Muchiitiko ichi, unogona kuzviita pawebhusaiti yako, pane ako ese masocial network uye, hongu, paYouTube.
Mamiriro ezvinhu? Kuti ivo vave vanyoreri veYouTube chiteshi. Zvichienderana nemubairo, uye vateereri vane makwikwi uye raffle, iwe uchawana zvakawanda. Semuenzaniso, unogona kuisimudzira nekudyara imwe mari mumashambadziro, izvo zvinozoipa kuoneka.
Pakutanga, zvichashanda zvakanyanya kana iwe ukapa zvinhu, asi kana nharaunda ikatanga kushanda zvakanyanya saka unogona kuvakumbira kuti vatore chikamu nekuvakurudzira matambudziko, kana nekuita kuti vatore chikamu mumavhidhiyo ako, ayo anogara achishanda.
Ita chimwe chinhu chakasiyana
Uye nekusiyana tinoreva zvakasiyana. Cherechedza kuti Kune mamirioni ezviteshi, uye ichokwadi kuti hausi kuzogadzira chero chinhu chisati chagadzirwa. Asi pachagara paine nzira yekuzviita.
Panyaya yeCommerce, iwe unayo zvishoma zvakaoma, asi chokwadi unogona kugadzira mavhidhiyo ane musimboti wechiratidzo chako, nzira yekutengesa, kuzivisa, nezvimwe. Izvi zvinozoita kuti vakuzive.
Semuenzaniso, ko kana uchitengesa chigadzirwa iwe unogadzira nyaya nacho? Ingave ipfupi yeminiti chete, asi ndeyekutanga zvekuti chokwadi hapana vakawanda vakazviedza. Uye hongu, inodhura. Kana kuti kwete, zvinoenderana nekuti unozviita sei (ikozvino zvinoitika kwatiri kugadzira mapepa emapepa (rudzi rwekuti paunofambisa mashizha anoita seanofambisa) uye, semuenzaniso, kukanda uta uye kukwezva chigadzirwa chauri kutengesa. .
Ipa dhizaini inoyevedza kuchiteshi chako
Yako YouTube chiteshi haisi yemavhidhiyo chete. Iwe une peji remba raunofanira kushongedza kukwezva kutarisa uye, panguva imwe chete, kumaka maitiro ako.
Saka iwe unofanirwa kupedza nguva kuti uwane chitarisiko chehunyanzvi uye, pamusoro pezvose, kuti inokuzivisa iwe, ingave semunhu kana sekambani, mhando, eCommerce ...
Kopa mavara kumakwikwi ako
Chokwadi iwe watsvaga imwe kana anopfuura chiteshi chemakwikwi uye iwe ungade kufanana navo, wobva wavakunda. Zvakanaka, tingavatevedzera sei? Kwete zvose, asi hongu matagi avanoita mavhidhiyo avo Nokuti, nenzira iyo, kana mumwe munhu achitsvaga mazwi iwayo, kwete chete ayo emakwikwi achaonekwa, asiwo ako.
Bhabhatidza vanyoreri vako
Vanyoreri veYouTube ikirabhu yako yefani, legion yako, zvisikwa zvako ... vanhu vanofarira zvaunoita uye, kuti vatore chikamu muchiteshi, unogona kusarudza zita.
Munyaya yeCommerce? Usazviita. Asi hongu unofanira tarisa kune vamwe vanyoreri, semuenzaniso, avo vanokubvunza mibvunzo, nokuti uchaita kuti vanzwe vachikosha, kuti vanodada nokuti mumwe munhu akavatumidza mazita uye nokuti vanopa mhinduro kumubvunzo wavanenge vabvunza mhenyu (kana kuti mune imwe vhidhiyo).
Itai mishandirapamwe inobhadharwa
Hazvigoneki kuti, pane imwe nguva muchiteshi chako, iwe unofanirwa kuisa mari kuti uitange. Kana iwe uchitarisira kuwana vateveri vazhinji nemasikirwo, iwe unofanirwa kuzvishongedza nekushivirira uye nguva yakareba, nekuti zvinotora nguva kuva navo.
Nokudaro, bhadharira mishandirapamwe paFacebook Ads, Instagram Ads kana Google inzira yekumhanyisa hurongwa.
Zvino, ramba uchifunga zvinotevera: isu tiri kutsvaga vanyoreri, asi isu hatipindi mumhando kana kwete yemhando yavo. Izvo zvinokuudza iwe nhamba dzinosara mushure mekupedza mushandirapamwe (zvizhinji gare gare sezvo vazhinji vasina kunyoresa).
Chii Isu hatikurudzire iwe zvachose, iri kuda kuwedzera huwandu hwevanyoresa nekuvatenga nekuti chinongo chaita ndechekuti une vatorwa, vasina chimiro, uye kuti ndeenhema. Izvi zvinoratidza, kunyanya kana iwe uine zviuru makumi maviri zvevanyoreri uye pasina anopindura pauri, kana iwe uchingove ne20000-1 vanofarira. Hauzonyengedzi mumwe munhu kunze kwako. Uye ego yakaipa kwazvo.
Batira pamwe nema youtubers
Kana uri kutanga nechiteshi, iva nekubatana kwemachaneli akatosimbiswa zvakanyanya Zvingave zvakanakira, nekuti ivo vachakubatsira iwe kukura kana vakakududza. Saka edza kuwana izvozvo.
Hongu, zvinokwanisika kuti vanokukumbira muripo, kana muchitoro unovapa zvinhu, asi ukawana maresults, zvinogona kunge zvisina kushata.
Usakanganwa nezve SEO YouTube
Tinorevei kana tichidaro? Zvakanaka chaizvo kuti chii mazita, tsananguro, tags, hashtag ... Vanofanira kuenda maererano nezvinodiwa nevanhu, kutsvaga uye kutevera. Kana iwe ukakwanisa kuita ongororo yakanaka yeYouTube chiteshi uye uchikwanisa kuwana mazwi akakosha echikamu chako, zvichibva pane zvinotsvagwa paYouTube, iwe unowana mavhidhiyo ako kuti aoneke mukutsvaga.
Sezvauri kuona, kuziva nzira yekuwana vanyoreri paYouTube hakuna kuoma, nekuti pane akawanda misoro paInternet inokuudza nezvazvo. Asi vese vanopedzisa pachinhu chimwe: iva nedhizaini yakanaka dhizaini, gara uripo mumavhidhiyo, uvaise paYouTube SEO uye gadzira vanhu. Kana iwe ukawana izvo, chiteshi chinotanga kukwidza nhamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Maitiro ekuita vanyori paYouTube
Kukosha kwekuisa branding muCommerce
Chii chinonzi content marketing